Abakhiqizi bePulasitiki & abahlinzeki - Ifektri yaseChina yePlastiki
Sula Lid alahlwayo Plastic Sushi Ibhokisi
Noma ngabe uhlela ukushintsha ibhokisi le-sushi elilahlwayo, noma ufuna imikhiqizo elungile ngamanani ezomnotho, thenga izinto ezisebenza ngogesi online kuThimba likaChunkai. Imikhiqizo yethu ifunwa kabanzi phakathi kwamakhasimende ngenxa yezici zawo ezifana nokwakhiwa okuqinile, ukulwa nenkungu, ukumelana nokugqwala nempilo yenkonzo ende. Ngosizo lochwepheshe bethu, sinikeza le mikhiqizo ngosayizi abahlukahlukene ngokwezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ethu abalulekile. Ngaphezu kwalokho, inkampani yethu ngokukhethekile yokukhiqiza professional sushi ibhokisi, alahlwayo plastic sushi ibhokisi.
I-Plastic Fine Mist Sprayer ene-Overcap
Ama-mister amahle afutha izinto ngobumnene endaweni enkulu. Ngokungafani nokuthela imikhiqizo, uma usebenzisa i-mister caps, izinto azicwilisi noma zigcwalise izindawo, kepha kunalokho, zisebenzisa ungqimba omncane wemikhiqizo, okuhlanganisa izinto ezifana nesifutho sezinwele namakha. Inani elisetshenzisiwe nalo lingalungiswa ngokufafaza okuningi. Uma kukhulunywa ngokusebenzisa okuvuselelwa komoya, ifu lenkungu enhle lisakazeka kalula njengoba lihlala emoyeni isikhathi eside futhi izinhlayiya zilula. Ngenkathi amanye ama-detergents angahle alungele ukusebenzisa ama-trigger sprayers, ahambisa umkhiqizo phezu kwezindawo lapho kuqhuma khona ama-thicker, ama-cleaner amafasitela nemikhiqizo yokuhlanza izinkuni kaningi yenza kangcono lapho efuthwa kusuka kuma-misters amahle.
Izipuni Ezilahlwayo Imimese Fork Cutlery Tableware
Izipuni ezilahlwayo Imimese Fork Cutlery Tableware yenza impilo ibe lula kumabhizinisi, okuthi esikhundleni sokugeza inqwaba yezimfoloko zensimbi, izinkezo, nemimese, angamane acele abasiki bensimbi ukuthi balahle imishini yabo yokusika uma sebeqedile ukudla. Futhi kwenza impilo ibe lula kubathengi ababamba imicimbi noma amaphathi anenani elikhulu lezivakashi.
Umshini Wokugcina Izikhwama ku-Space Saver
Izikhwama zokuhlanza noma izikhwama zokucindezelwa sezithandwa kakhulu kule minyaka embalwa edlule njengoba abantu abaningi ngokwengeziwe sebeqalile ukucindezela izingubo nezindwangu ukonga isikhala.
Isebenza nganoma iyiphi umshini wokuhlanza, vele uyipakishe. Ilondoloza isikhala sokugcina, isikhala esingu-80% sincishisiwe
Uziphu ophindwe kabili ugcina ungangeni moya futhi ungangeni manzi, isiqeshana sesevisi esinamathiselwe kuzo zonke izikhwama
Akunasikhunta nesikhunta, vikela izingubo zakho, amashidi okombhede, imicamelo, izingubo zokulala
350ml Amafutha U-ukuma Pet Plastic Ijusi Bottle
Le bhodlela le-350ml Fat U-shape Pet Plastic Juice Bottle yinhle kakhulu, ilungele ujusi, iziphuzo namanzi.Yayisebenzisa impahla ebangeni lokudla i-PET, i-BPA mahhala, ifaniswa nokweba cap cap.Singakwazi ukwenza ngokwezifiso umbala webhodlela, futhi ukufaka ilebula noma ukuphrinta logo ebhodleleni.
Izikhwama Zokugqoka Zezingubo Zeplastiki Esobala
Lezi Zikhwama Zokugqoka ze-Plastic Transparent PE Zipper zenziwe ngezinto ezintsha ze-PE, ukuqina okuqinile, ukubukeka okubushelelezi, okubhalwe kalula, okuhle nokuphana, kungabhalwa futhi kuprintwe.Izikhwama Zokugqoka Zeplastiki Ecacile Zineziphu zokufaka uphawu ezinhle ngokuqhuma okuphezulu kwengcindezi- onqenqemeni uphawu uphawu.
Chubby Sula Ubisi Tea Pet Bottle
Le Bhodlela le-Chubby Clear Milk Tea PET lihle kakhulu, lilungele itiye lobisi, iziphuzo namanzi.Lisebenzise impahla yokudla ebangeni lokudla, i-BPA mahhala, ifaniswe nokhiye wokuqinisekisa ukweba.Singakwazi ukwenza ngokwezifiso umbala webhodlela, futhi ukufaka ilebula noma ukuphrinta ilogo ibhodlela.
Ibhodlela le-Creative Conical Shaped lokuthatha
Leli bhodlela le-Creative Conical Shaped for Takeaway lihle kakhulu, lilungele amanzi amaminerali, iziphuzo namanzi.Lisebenzise impahla yebanga lokudla, i-BPA mahhala, ifaniswe nokweba ubufakazi bokuthi.Singakwazi ukwenza ngokwezifiso umbala webhodlela, futhi ukufaka ilebula noma ukuphrinta ilogo ibhodlela.
Isikhwama Samadoti Okuvala Ngokuzenzakalelayo Kwentambo Yemfucumfucu
Lesi sikhwama semfucumfucu se-Dot-break Automatic Closing Rope Garbage senziwe ngezinto ezintsha ze-HDPE, ukuqina okuqinile, ukubukeka okubushelelezi, okulula ukubhala, okuhle nokusebenziseka kalula.I-Dot-break Automatic Closing Rope Garbage Bag ingabamba udoti osindayo nge-dot break design.
Isiqukathi Esimbili Sokudla Kweplastiki
Lesi Sitsha Esimbili Sokudla Kweplastiki sithandwa kakhulu futhi siyathengisa,
Gcina Ukudla Kusha: Ibhokisi Lasemini Elikhulu Lokudla Kwasemini ukuze ugcine ukudla kwakho kusha futhi kudla ukudla kulula.
Ukuphepha: Isitsha nesivalo kwenziwa ngezinto ze-BPA-Free neFood-Grade Safe PP.
Iyasebenza futhi ihlala isikhathi eside: Isitsha senzelwe ukugoqeka efrijini noma esikhwameni sasemini, ngesivalo esivuzayo nesivalo somoya.
I-Microwave / Freezer / Umshini wokuwasha izitsha Uphephile Ku-Rack Ephezulu: Melana nokushisa kusuka -40 ° F kuye ku-320 ° F (Noma -40 ° C kuye ku-160 ° C)
Umshini Sealer Izikhwama for Saver Ukudla
Lezi zikhwama ze-Vacuum Sealer ze-Food Saver zithandwa kakhulu futhi ziyathengiswa.
Ukuphepha: I-BPA Free, Simmer kanye neMicrowave Safe, ilungele ukupheka kweSous Vide
I-One for All: Yakhelwe ukusetshenziswa ngayo yonke imishini yokupakisha engenalutho
Umsebenzi osindayo: Ibanga lezentengiselwano lezinto eziningi livimba umoya-mpilo nomswakama futhi kuqeda ukusha kwamakhaza nokoma
Ezomnotho: amaphakethe ama-2 `` ububanzi obungu-11, ubude obungamamitha angu-50. okungamamitha ayi-100 esewonke. Ukwenza ubude bakho besikhwama.
Alahlwayo Takeaway Plastic Isitoreji Ukudla Isitsha
Lesi sikhongozeli sokudla esilahlwayo esilahlwayo esithandwayo sithandwa kakhulu futhi siyathengiswa okushisayo.Nakuba ukudla ngokwesiko kucatshangwa ukuthi kuqukethwe kumaphakethe e-blister, iqiniso ukuthi imikhiqizo eminingi yabathengi ingazuza ekupakisheni i-blister. Ukukhetha okuhle kakhulu lapho ufuna abathengi babone umkhiqizo wakho eshalofini lesitolo, amaphakethe e-blister angenziwa kalula enziwe ngezici ezahlukahlukene nokukhethwa kokuklanywa ukuhlangabezana nezidingo ezithile zomkhiqizo wakho. Ukupakisha iBlister futhi kwenza umsebenzi omkhulu wokugcina imikhiqizo yakho iphephile ngenkathi yenza ukufinyelela kube lula kumthengi. Cabanga ngezinzuzo ezilandelayo zokupakisha kwe-blister.